घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो हबीब डायलो बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो सेनेगाली पेशेवर फुटबलरको जीवनकाल हो, उहाँ बाल्यकालदेखि, जब उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूख मिल्न यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - हबीब डायलोको बायोको उत्तम सारांश।
प्रारम्भिक जीवन र हबीब डायललोको उदय।
हो, बाट फुटबलर Senegalese परिवार मूल स्कोरिंग गोलहरूको लागि एक ठूलो आँखाको साथ सर्वोच्च प्रतिभाशाली हुन परिचित छ। यद्यपि, केवल एक हातले मात्र हबीब डायलको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं.
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरूवात गरेर, हबीब डायलोका अभिभावकले उनलाई नाम दिए - हबीबौ मौहामादौ डायल उनको जन्म पछि को नाम “habib"जुन हामी सबैलाई थाहा छ उपनाम मात्र हो। हबीब डियाल्लो जून १ 18 1995 June को १ XNUMX औं दिनमा सेनेगलको थिस् शहरमा जन्म भएको थियो।
हामीसँग उनका भाई-बहिनीहरूको फोटोहरूका आधारमा, यो देखिन्छ कि यो फुटबलर आफ्ना आमा बुबाको दोस्रो छोरा र छोराको रूपमा जन्मेका थिए। तल हबीब डायलोका अभिभावकको फोटो छ जुन उनीहरूको पारिवारिक जराबाट आएको छ थाइज, सेनेगल.
हबीब डायलोका अभिभावक।
हबीब डायललो पारिवारिक जडहरूको बारेमा: सहर [थियस] जहाँ हबीबु मौहामादौ डियालोको परिवार सेनेगलको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर हो र यसको जनसंख्या २०० 320,000 मा आधिकारिक रूपमा estimated२०,००० अनुमान गरिएको छ। यो सहर देशको राजधानी डाकारबाट 2005 67.3..XNUMX किलोमिटर टाढा छ। अब, तपाईंको शहर को बारे मा के खास छ?… उनी उनीका लागि परिचित छ टेपस्ट्री- टेक्सटाईल कलाको एक रूप, परम्परागत रूपमा तनुमा हातले बुनेको।
हबीब डायालोको सेनेगलबाट उनको पारिवारिक उत्पत्ति भएको छ रूट्स थ्रेस थियस, सेनेगलको खोजी गरिएको छ।
सेनेगलबाट आएका अधिकांश फुटबलरहरू जस्तै हबीब डियाल्लोका आमा बुबाले निम्न तल्लो मध्यम वर्गको परिवार सञ्चालन गरे। यो प्रभाव यो छ कि फुटबलर एक औसत पारिवारिक पृष्ठभूमि को हो। हबीब डायालो आफ्ना भाइबहिनी, एक जेठा दाजु र केही कान्छीहरू दुबै पुरुष र महिलाको साथ हुर्केका थिए जसलाई हामीले यस लेखमा प्रस्तुत गरेका छौं।
हबीब डायललो शुरुआती वर्ष: तपाईंको उमेरमा हुर्कदै, हबीब डायलोका अभिभावक त्यस्तो किसिमका थिए जसले उनलाई किन्न सक्दैनन्, खेलौनाहरूको नयाँ संग्रह। उसले केवल एक फुटबल बल पायो जुन उसले दिनभरि धेरै चोटि खेल्थ्यो।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
हबीब डियाल्लोको बाल्यकालको समयदेखि नै, त्यहाँ शिक्षामा कुनै चासो थिएन किनकि युवा केटाले अरू कुनै पनि कुरा भन्दा फुटबल खेल्न रुचाउँथे। उ उसलाई थाहा छ कि उहाँसँग प्रतिभा छ र फुटबलबाट केहि बनाउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नो परिवार छोड्दै: टेपेस्ट्रीको कामका साथै पालिटेक्निक र युनिभर्सिटी रहेको थाइस शहरले हबीबलाई आफूले चाहेको कुरा कहिले पनि दिँदैन। सुनेको छ फुटबल सफलताका कथाहरू सेनेगलको राजधानीबाट (डकार), जवान व्यक्तिले आफ्नो सपना पछाडि परिवार छोड्ने निर्णय गरे। एक सफल आवेदन पछि यो जवान जनरेशन फुट द्वारा परीक्षणको लागि आमन्त्रित गरिएको थियो, एक डाकार (सेनेगलको राजधानी) क्लब २०० Mad मा माडी टूरले स्थापना गरेको थियो।
हाम्रो धेरै आफ्नै डायल्लो फुटबलिट जेनेरेशन फूटमा शिक्षित थियो।
धेरै मानिसहरु जसले प्रयास गरेका थिए र यश पाए उनी जस्तै। Sadio मनी र Papiss Cissé, आदि, हबीब Diallo पनि जेनरेट फुट संग एक सफल परीक्षण थियो। पछाडि र अहिले, जेनेरेशन फुटका प्रत्येक खेलाडीसँग एक चीज समान थियो -युरोपियन सपना ”। हबीबका लागि, यूरोपीयन क्लबमा खेल्ने उनको दृढ संकल्पलाई कहिले कालो कल्पनाको रूपमा हेरिएन।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… २०० Since देखि, जेनेरेशन फुटले फ्रान्सेली क्लब एफसी मेट्जसँग यसको तालमेलको लागि प्रतिष्ठा कमाएको थियो। धेरैका लागि, जेनेरेशन फुट को मानिन्छ एफसी मेट्जको अफ्रिकी पोखरी। मेट्जबाट क्लब स्काउटहरू अक्सर खेलाडीहरू जेनेरेशन फुटको छनौट गर्न आउँदछन् तिनीहरूका लागि युरोपमा खेल्नका लागि।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जब उसले आफ्नो परिवार गर्व गर्‍यो: जेनेरेशन फुटमा हुँदा, हबीब डायालोले आत्मविश्वासका साथ फुटबल खेल्ने क्रम जारी राख्यो र आफ्नो चिन्हलाई ओभरटेप गर्ने र फुटबल बलको साथ निलो बाहिर चीजहरू गर्ने बानी बसाल्यो। चाँडै, उनी एकेडेमीको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति भए। तपाईको स्थानीय केटाले आफ्नो स्वागतको साथ आफ्नो भाग्य को आकार बदलेको देख्यो खुसीको खबर.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… युरोपमा उनीहरूको अकादमीमा खेल्न एफसी मेट्ज स्काउट्स द्वारा उनलाई छनोट गरिएको समयमा हबीब डियाल्लोका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको गर्वको कुनै सीमा थिएन। तल चित्रण गरिएको छ, यो देखिन्छ कि स्थानीय केटो उहाँको सम्पूर्णमा पहिलो हुन सक्छ परिवार वंश युरोप मा अवतरण गर्न।
यो देखिन्छ कि स्थानीय छोरा आफ्नो परिवारमा पहिलो हुन् जसले आफूलाई युरोपमा अवतरण गरे।
हबीब डायलले पछ्याए रिगाबर्ट गीत, कलिडो कुलिबिले, Papiss Cissé र Sadio Mané जो FC Metz र अफ्रिकी क्लब बीच सम्झौताको अघिल्लो फलहरु भनिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… जेनेरेशन फुटमा उसको सफलताले मनपर्दोहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो इस्लामला सर पछ्याउन।
सुरुमा यो सजिलो थिएन, तर हबीब डियालोलाई आफुको वरिपरि परिवारको कुनै सदस्य नभए पनि फ्रान्समा एक्लै बस्न बाध्य पार्नुपरेको थियो। युवासँग क्लबको साथ छाप पार्न लामो समय लागेन, एउटा यस्तो उपलब्धि जुन धेरै छिटो स्थानमा देखापर्दछ।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि
जब जाँदै थिए आफ्नो युवा कोच प्रभावित पछि, हबीब Diallo वर्ष २०१ acade मा एकेडेमी स्नातक की उपाधि प्राप्त। आफ्नो स्नातक पछि, युवा मेट्ज द्वितीय संग खेल्न नियुक्त गरियो (FC Metz अन्डर २ 23s)। क्लबको वरिष्ठ टीममा प्रवेश गर्नु उसले सोचेको भन्दा कठिन थियो। निराश हबीबले भने कि उनी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र उनका प्रतिद्वन्द्वीलाई एफसी मेट्ज वरिष्ठ पक्षमा बेंच गर्न सक्छन्। ऊ मेट्ज पहिलो टीम प्रतियोगितामा हार्यो।
जब जाने कठिन भयो।
उसले आफ्नो payण तिर्न सुरु गर्यो: अन्य अनुभव पाउनको लागि, हबीब डायलले buildण लिने बित्तिकै आफैंलाई निर्माण गर्ने निर्णय गरे। उनलाई स्ट्याडे ब्रेस्टमा पठाइएको थियो, फ्रान्सेली फुटबल क्लब जो बढाएको छ भनेर चिनिन्छ फ्रेंक रिबेरी। ब्रेस्टमा, डायलले एफसी मेट्जको पहिलो टिम प्रतिस्पर्धालाई हराउने आशाको साथ आफ्नो अनुभव निर्माण गर्न अथक प्रयास गरे। सफल हुन कोसिस गर्दा उनले एक पटक आफ्नो शब्दमा भने;
"धेरै खेलाडीहरू जस्तै, तपाईं जहिले पनि राती एकै ठाउँमा निर्माण गर्नुहुन्न। तपाईं तुरुन्तै माथि जानु हुँदैन। कहिलेकाहिँ तपाईंले आफूलाई ढिलो बनाउनु पर्छ। "
उसको सम्झनाको लागि औचित्य: २०१–-१– Ligue १ सत्रको लागि, FC Metz एक भयानक अभियानको सामना गर्‍यो, पहिलो बाह्र खेलहरुमा एघार गुमाउँदै। क्लबको प्रबन्धक फ्रेडरिक ह्यान्ट्ज एक खेलाडी को लागी हताश खोजी थियो जो प्रशंसकहरु लाई आशा को किरण आउँछ। यसले हबीबलाई अन्तिम अवसर प्राप्त गर्न loanणमा फिर्ता आएको देखे।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
चुस्नु भन्दा बरु सेनेगाली फुटबलर आफ्नो क्लबलाई मद्दत गर्ने क्रममा उत्रनको लागि उत्रियो तिनीहरूको यात्रा बाट पुन: प्राप्ति। हबीब डायल फर्किएपछि जनावर भयो - बक्सको एक शिकारी र एफसी मेट्जको नयाँ पुस्ताको प्रतीक। ऊ उनको लागि प्रख्यात थियो खेल को शैली शारीरिक शक्ति, गति, हावामा क्षमता (जस्तै सी रोनाल्डो), + शक्तिशाली र सही स्ट्राइकहरू Didier Drogba.
सेनेगाली स्टारको अन्तिम उदय तेस शहरबाट। उनी एफसी मेट्जको हिरो भए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… ब्रेकआउट तारा र गोल मेशिन एक ठूलो 26 लीग गोल हाय को लागी रन बनाएसटीकता र शक्तिको आश्चर्यजनक संस्कारित संयोजन। T माऊ अप्रिल २०१ 26 को २th औं दिन, हबीब डायलले आफ्नो क्लबलाई लिग १ मा फिर्ता पदोन्नति गर्न मद्दत गरेको छ। उनको एफसी मेट्ज पक्ष लिग २ तालिकामा पहिलो स्थानमा छ।
सेनेगाली स्टारले एफसी मेट्जको साथ एक उल्का वृद्धि हासिल गर्‍यो, जसले उनको टोली प्रमुख सम्मान प्राप्त गर्न अग्रसर भयो।
फ्रान्सेली लिग वास्तवमा युरोपको शीर्ष प्रतिभाको पोषणका लागि शीर्ष लिग हो जसलाई मनपर्दो मा देखा पर्दछ मिस, जोखिम, बेंजमा, निकोलस पेपे, Moussa Dembele र अधिक हालसालै भिक्टर ओसिम्हेन। सूची मा जान्छ। हामी विश्वस्त छौं कि हबीब डायलो त्यहाँ उनीहरूको साथ जोडीनेछ। सत्य हो, उनीसँग अफ्रिकी फुटबलको भविष्य बन्ने सम्भावना छ। Diallo अर्को हुन सक्छ डोगाबा… एतीकै भनेको। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
सेनेगाली फुटबल सम्बन्धी शिखर सम्मेलनले हबीबलाई सफल मान्छे बनाउँछ। यसैले यो निश्चित छ कि सबै प्रशंसकहरू (विशेष गरी सेनेगलका महिला फ्यानहरू) उनीहरूको दिमागमा निम्न प्रश्नहरू सोच्न शुरू गरेको हुनुपर्छ; हबीब डायलको गर्लफ्रेंड को हो?...। हबीब डायलको श्रीमती को हो?… के हबीब डायललो विवाहित हो?
फुटबल फ्यान (विशेष गरी महिला) सेनेगाली सुपरस्टार को प्रेम जीवन मा चिन्ता लिएको छ।
हो !! त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन डायललोको प्यारो देखिन्छ आफ्नो व्यावसायिक सफलताको साथ उनलाई हरेक सम्भावित प्रेमिका वा पत्नी इच्छा सूचीको शीर्षमा राख्दैन।
सत्य कुरा हो, सफल फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ निश्चित रूपले एक महिला छ जोकि एक हुन हुन्छ एक पत्नी वा बच्चा आमा। उनी आफ्ना बच्चाहरूको आमा हुन् (तल चित्रमा)। हबीब डायलोको आफ्नी पत्नी वा बच्चा आमासँग निश्चित सम्बन्ध छ सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्दछ किनकि यो निजी हो र सम्भवतः नाटक मुक्त छ। हाम्रो अनुसन्धानले खुलासा गर्‍यो कि उनी दुई सुन्दर बच्चाहरुका अभिभावक हुन् (केटा र केटी) उनको लागी पत्नी वा बच्चा मामा बाट।
चित्रित हबीब आफ्नो छोरी र छोराको साथ एक सेलिब्रेरी मुडमा छन्।
उहाँ एक राम्रो बुबा हुनुहुन्छ: प्रत्येक सुखी परिवार को एक मायालु बुबा को आवश्यकता छ र हबीब Diallo एक फिट। घमण्डी बुवाले एक पटक आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा एक सिजलिंग फोटो साझेदारी गर्नुभयो जहाँ उहाँ आफ्नो सुन्दर छोरीसँग घमाइलो छुट्टीको आनन्द लिई पूर्ण रूपमा सहज देखिनुहुन्छ।
ऊ वास्तवमा संसारमा देखाइन्छ कि उहाँ आफ्ना बच्चाहरूको लागि अद्भुत अभिभावक हुनुहुन्छ।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
सेनेगलको सडकबाट कसैलाई सोध्नुहोस् कि यो भोकले भोकमरी हुन योग्य छ कि छैन र उनीहरूले सम्भवतः भन्न सक्छन् NO। हबीब डायल्लो एक त्यस्तो व्यक्तिको उत्तम उदाहरण हो जो कुनै पनि करोडपति फुटबलर बन्नको लागि आएन। लेख्ने समयमा, उहाँ एक विलासी जीवनशैली बिताउनुहुन्छ, जुन आफ्नो कब्जामा रहेका अन्य सुन्दर चीजहरू बीच आफ्नो विदेशी कारले सजीलोसँग देख्न सकिन्छ।
उहाँ एक विलासितापूर्ण जीवनशैली बाच्नुहुन्छ जुन उनको अनौंठो कारले सजिलैसँग सजिलै देख्न सक्दछ जुन उहाँ शहरको चारैतिर फ्ल्यान्ट गर्नुहुन्छ।
उसको अनौंठो जीवनशैलीको बारेमा अवलोकन पछि, धेरै प्रशंसकहरू विशेष गरी जसले आफ्नो कारलाई देखेका छन् उनीहरूले सोधेको हुनुपर्छ ... हबीब डियाल्लोको ज्याला र वार्षिक तलब के हो?
फुटबलरले लेख्ने समयमा € १,, w०० के साप्ताहिक ज्याला र वार्षिक तलब कमाउँछ।€२K, वाह!… एक सूचक उसलाई एक विदेशी जीवन शैली बाँचिरहेका। तपाईंलाई थाँहा थियो?… सेनेगलमा औसत व्यक्तिले कम्तिमा years बर्षसम्म काम गर्नु पर्छ जसमा हबीबले एक महिनामा कमाए।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
एक पारिवारिक रोटीविनरको रूपमा सफल फुटबलर पाएको महसुस कसरी हुन्छ?… यो खण्डले यो सबैको वर्णन गर्दछ। यहाँ, हामी तपाईलाई हबीब डायलोको परिवारका सदस्यहरुको बारेमा उसको आमाबुवासँग शुरू हुने बारे बढी तथ्यहरु प्रदान गर्दछौं।
हबीब डायललो फादरको बारेमा अधिक: Oussynou Diallo हबीब को गर्व बुबा को रूप मा परिचित छ। तल देखिए अनुसार नम्र र तल पृथ्वी मानिस एक फुटबलर को लागी एक करोडपति छोरा भए पनि आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न इन्कार गरेको छ।
हबीब डायलोका बुबाको अन्तर्वार्ता लिइयो।
Oussynou Diallo पत्रकारलाई उनको पुरानो शैलीको घरमा स्वीकार गर्दछ जहाँ उनी आफ्नो छोराको सफलता र फुटबलको बारेमा छलफल गर्छन्। ठिकै कुरा यो हो कि हबीबले आफ्नो बुवालाई आफ्नो परिवारलाई हवेलीमा सार्न लगाउनु भन्दा पहिले यो कुरा हो।
हबीब डायलोको आमाको बारेमा अधिक: महान अफ्रिकी आमाहरूले ठूलो छोराहरू जन्माइन् र हबीब डायाल्लोको भाग्यशाली आमा भने एक अपवाद होईन। थाइजको पत्रकारसँग कुरा गर्दै यस सुपरममले उनको हबिब डायलोकी आमा हुन पाएकोमा गर्व महसुस गरी।
हबीब डायलोकी आमाले पत्रकारलाई उनको छोराको सफलताको बारेमा बताइन्।
हबीब डायालोले आफ्नो सफलताको ठूलो अंश उनको आमाले दिएको पालनपोषणलाई दिए। यस समर्पित आमाले आफ्नो छोरा बढेको र आफू जे भएको छ त्यसमा खुशी भएको सदैव चाहन्थ्यो।
हबीब डायलोका भाइ र बहिनीः धन्यवाद तपाइँको जानकारी मिडिया, हबीब Diallo का भाई बहन योन Dieng हबीब र ताहिती हबीब आफ्नो ठूलो भाइ को उपलब्धिहरु मा धेरै गर्व छ। यस्तो सम्भावना छ कि एक वा दुबै भाइहरूले हबीबको पाइला पछ्याउने कोशिस गरे होलान्।
हबीब डायलोका भाइ र बहिनीलाई भेट्नुहोस्।
हबीब डायलोको ठूलो भाई: हबीब डायलोको बीig भाई आफ्नो मातृभूमि मा फिर्ता उनको प्रमुख समर्थकहरु मध्ये एक हो। सुपर ठूलो भाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय र super्गमा देख्दा उसको सब भन्दा राम्रो क्षण हो भनेर चिनिन्छ। सेनेगाली राष्ट्रिय टोलीमा एक परिवारको सदस्य हुनुले उसको लागि ठूलो गर्वको भावना ल्याउँछ।
मानिसलाई भेट्नुहोस् जो सम्भवतः हबीब डायलको ठूलो भाई वा काका हुन सक्छ
हबीब डायलोको मानिएको सौतेनी आमा प्रायः हबीब डायलको बुबा, आमा र परिवारको घरमा भेटिएपछि उनी फुटबलरकी सौतेनी आमा हुन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन। उनी माथि चित्रित साना बच्चाहरूको एक आमा पनि हुन सक्छिन्।
महिलालाई भेट्नुहोस् जो सम्भवतः हबीब डायलको स्टेपम हुनसक्छिन्
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
हबीब डायलोको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईको व्यक्तित्वको राम्रो चित्र हटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। Aफुटबलबाट बाटो, हबीब त्यस्तो व्यक्ति हो जसले विशेष रूपमा उस्तै परिवारको साथ मानिसका साथ हुन चाहन्छ। उनी आधुनिक समयका फुटबलरको विशिष्ट प्रख्यात नम्रता प्रदर्शन गर्न मन पराउँछन्।
खेलको पिचको हबीब डायलोको व्यक्तित्वबारे जान्दै।
दोस्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा, हबीब अप देखिन्छ Didier Drogba, आफ्नो मूर्ति र क्यारियर अभिभावक। को लागी उनको प्रशंसा डोगाबा सेनेगलबाट फर्केर आउँछ त्यस समयदेखि उहाँ आफ्नो बुबाआमासँग बस्नुहुन्थ्यो र हेर्ने केन्द्रहरू मार्फत प्रिमियर लिगमा जानुहुन्थ्यो।
अन्तमा हबीब डायलोको व्यक्तिगत जीवन कुकुरहरूसँगको उस्तै हो। Fओटबलर अर्थात्; Messi, Daley Blind, मार्सेलो, हारून रस्सी र जेम्स Rodriguez आदि सबै आफ्नो घरपालुवा जनावरहरु (कुकुरहरु) लाई प्रेम गर्छन्। उनको साथ चित्रित हबीब Diallo एक अपवाद छैन। तल चित्रित सेनेगालीहरु उसको प्यारा बच्चाको छनौट गरिरहेछन्।
धेरै फुटबलरहरू उनीहरूको कुकुरलाई माया गर्छन् र हाम्रो आफ्नै Diallo एक अपवाद छैन।
तपाईको भनाइ छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छैन, यसले निश्चित रूपमा हबीब र उसको प्यारा कुकुर बीचको सम्बन्धलाई ध्यान दिदैन।
हबीब डायलोको धर्म: धेरै सेनेगाली फुटबलरहरू जस्तै, यो धेरै सम्भावना छ कि हबीब डियाल्लोका आमा बुबाले उनलाई स्वीकार गर्न हुर्काए इस्लामी धार्मिक सिद्धान्तहरू। हबीबले आफ्नो धर्मको अभ्यास गरेको फोटो प्रमाणहरू पाउने बित्तिकै हामी तपाईंलाई अपडेट गर्नेछौं।
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उनको अगाडि FC Metz उल्लेखनीय फुटबलरहरू: हबीब डियाल्लो भन्दा पहिले, त्यहाँ अन्य FC Metz, महापुरूषहरू थिए जसले पनि प्रभावशाली नाटकहरू र मैदानहरू नष्ट गरे लक्ष्य. शीर्ष बायाँ देखि दायाँ तल, हामी संग छ कलिडो कुलिबिले, Emmanual Adebayor, Sadio मनी, फ्रैंक रिबेरी र लुई साहा.
उल्लेखनीय फुटबलरहरू जसले FC Metz चराएका छन्।
तल बायाँ देखि दायाँ हामीसँग छ रिगाबर्ट गीत, सिल्भेन वेल्टर्ड, रोबर्ट पायर्स, मिराकल पंजनी र Papiss Cissé.
ट्याटू: ट्याटू संस्कृति आजको फुटबल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। हबीब डायल ट्याटु-मुक्त छैन। उसको ट्याटू “INAYA- XIIIXIMMXVI"दायाँ आफ्नो देब्रे पाखुरा एक चित्र को प्रतिनिधित्व गर्दछ कि केहि वा उसले आफ्नो मुटुलाई हिम्मत प्रतिनिधित्व गर्दछ।
आफ्नो ट्याटूको अर्थको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ। तर हामीलाई थाहा छ कि उसले यसलाई आफ्नो मुटुको नजिक राख्छ।
अन्डररेटेड फिफा रेटिंग्स: अद्यावधिक खेलाडी रेटिंगहरू जहिले पनि चर्चाको लोकप्रिय विषय हुन्छन् जब पनि नयाँ फिफा बाहिर निकाल्दछ, र फिफा २० हबीब डायलको लागि फरक हुँदैन। सेनेगाली फुटबलरलाई एक सीजनमा २ 20 लीग गोल गर्नेको बावजुद उनी अन्डररेट भएको पत्ता लगाउने दुर्भाग्य थियो।
हबीब डायलो फिफा रेटिंग्स उनी अत्यधिक अन्त्रित छन् भनेर देखाउँदछ।
अधिकांश फिफा २० गेमरहरू हबीब डायलोको रेटिंग्समा चित्त बुझाउँदैनन्। उसले पाउनुपर्ने मान्यता पाएनन् भन्ने भावना त्यहाँ थियो।
उहाँ बहु-स्तर मार्केटिंग निगमको अनुहार हुनुहुन्छ: हबीबले मैदानको वरिपरि बल लात हान्ने मात्र पैसा कमाउँदैन। प्रायोजनको पैसाले उसको आयको स्रोतमा ठूलो भूमिका खेल्छ। हबीबले लेखेको समयमा भर्खरै प्रायोजन साझेदारीमा मोहर लगाए हर्बालाइफ इन्टरनेशनल अफ अमेरिका, Inc.
हनीब डायालोले जेबमा पैसा राख्ने क्रममा केही विज्ञापनहरू चलाउन मन पर्दैन।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।